विश्वका चर्चित राजनेताहरू जसलार्इ भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो — newsclubnepal.com
Brazilian former president Luiz Inacio Lula da Silva speaks duringapress conference in Sao Paulo, Brazil on September 15, 2016.
Lula da Silva defended himself against corruption charges Thursday, saying the case against him was an attempt to destroy him politically ahead of elections in 2018. / AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA
अरु धेरै देशमा पनि शक्तिशाली पात्र भ्रष्टाचारको आरोप लगेर राजनीतिक जीवनबाट हात धुनुपरेको छ । क्रोएसियामा सन् २००३ देखि २००९ सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका इभो सानाडर सन् २०१० मा भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार हुनुभयो । सन् २००५ देखि २०११ सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पोर्चुगलका समाजवादी नेता जोसे सोक्रेट पनि जीवनको अन्तिम समयमा आएर भ्रष्टाचारी कहलिनुप¥यो । लामो समयको अनुसन्धानपछि सन् २०१७ को अक्टोबरमा उहाँविरुद्ध अपराध, सम्पत्तिको अपचलन, कर छली, कागजपत्रहरुको दुरुपयोगलगायतका ३१ ओटा मुद्दा लगाइयो । रोमानियाका पूर्वप्रधानमन्त्री अड्रिन नास्तासलाई सन् २०१२ मा साढे चार वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो । उहाँ सन् २००० देखि २००४ सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसैगरी पेरुका अल्बेरर्टो फुजिमोरी र ओल्लान्ता हुमाला, इजरायलका इहुड अल्मर्टले पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय भोग्नु भएको छ । सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मोल्डोभा, ग्वाटेमाला लगायतका देशका पूर्वप्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारको सजायमा छन् । परिवर्तन अावाजबाट